Media sy Fanoratan-gazety · Novambra, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Media sy Fanoratan-gazety · Novambra, 2019
Tantara mikasika ny Media sy Fanoratan-gazety tamin'ny Novambra, 2019
Karaiba-Etazonia : Fa mba aiza no misy an'i Allen Stanford ?
Amerika Avaratra17 Novambra 2019
Hatraiza ireo mpanao politika any amintsika no ho voasaringotra anatin'ireny andrim-panjakana marary ireny ary indrindra indrindra, iza no mitantana azy ireny ? Raha tena misy tokoa ny fifandraisany amin'ireo mpanao politika any amintsika, hatraiza no fiantraikan'izany amin'ireo fepetra sy fanapahankevitra politika ?
Nilaza ilay mpanao gazety Vanuatu fa nofoanana ny fahazoan-dàlany miasa noho ny fitsikerany ny governemanta
Oseania15 Novambra 2019
"Hisalasala ny olona ary hiteny karazan-javatra maro, kanefa toy izao ihany no hiafarany hoe: Niteny aho, ary nosaziana noho ny filazako ny marina."
Azia Atsimo14 Novambra 2019
Fahabetsahan'ny olona, fahatapahan'ny aterineto, fanohanana avy amin'ny antoko mpanohitra, fankahalàna Qadianis, fihofahofan'ny saina Taliban, fanakiviana ny vehviavy tsy handray anjara no anisan'ny mampiavaka ny diabe Azadi/dharna tanterahana ao Islamabad.
Vietnam: Mpampianatra fahiny teny amin'ny oniversite, nogadraina noho ny zava-boasoratra tety anaty aterineto
Azia Atsinanana13 Novambra 2019
Tohizan'ireo manampahefana ao Vietnam ny fanamafisan-dry zareo ny famoretana ireo olontsotra tsy hanana ny fahalalahana maneho hevitra, eny fa na tsy misehatra amin'ny fikatrohana eny ifotony aza izy ireny, na anaty hetsika politika.
Afrika Mainty10 Novambra 2019
Fanentanana iray manohana ilay mpilalao sarimihetsika Pakistaney Rabi Pirzada taorian'ny nivoahan'ny sariny mitanjaka
Azia Atsimo09 Novambra 2019
Mampiseho ny fomba hamelezana manokana ny olona amin'ny fahalalahany maneho hevitra ao Pakistan ny tranga nahazo an'i Rabi Pirzada.
Nahoana i Pakistan no miezaka manelanelana amin'ny fifampiresahana fandriampahalemana eo amin'i Iran sy i Arabia Saodita?
Azia Atsimo07 Novambra 2019
Na eo aza ireo olana anatiny marobe tsy voavaha, voatsikera mafy ao an-tanindrazana sy ny any ivelany ny andraikitr'i Pakistan amin'ny fifampiraharahana amin'ny resaka fandriampahalemana Iran-Saodita.